Hundee Badhaadhinaa | Welcome to TEAM
Bu’ura Umama qabeenya kan ta’aan Gaboota Qinxaaboo fi tajaajila, Sadarkaa Ogummaan haayyuu ta’uun ni murtaa’uu, gabaa gurmaa’ee keessattii Omishtonnii jiran Baasiwwan Omisha madaallii dhaan muxannoo tilmaama isaanii ni guddisuu. Ittiifayadamtonnii madaalummaan dhiheessa Qinxaaboo gatii tilmaamameefiin ni durfamuu. sochiiwwan gabaa osoo Addaan hin kutamiin raawataman sadarkaa Amanuuf ulfaatuun Gahuumsaan kan hojatani dha. Bittaaf gurgurtaan Qinxaaboolee Baay’een kan keessattii Adeemsifamuu Walittii hidhinsa Gabaa Walxaxaa iddoo jiruttii wanii mirkaneessinee bioroon Qinxaaboolee namonnii bitan fi gurguran Baay’ina isaanii fi gatii xumura isaanii tilmaamuu kan danda’uu moodeela ni jiraa kan jadhuu gonkuma hin fudha.
Sirrii dha gahumii Gabaan Lakk Hirmaattoota dabaluu, Ragaa Gutuu ta’ee, Beekumsa Dinagdee YKN bifa isaan baay’ee Addaa kan ta’ee haayummaa gabaa kan barbaaduu mitii, ka’umsa irraa yoo ilaalluu namoonnii gabaa keessattii kan Adeemsifamuu hojii daldalaa yoo ilaalluu namonnii gabaa keessattii hojii daldalaa hojachaa kan turan yaroo dheeraan dura haala gabaa kan qoratuu Ikonomistii tokkoo illee iddoo hin jirreettii turee. wanti isin barbaachisuu, Hojii daldala keessanittii Hojii baay’ee YKN Maallaqa Xiqqoo umaa yaroo jirtanittii Hojii keessan foyeessuuf carraa qabaacuu keessan beekuu dha.midhaginnii gabaa’onnii Qinxaaboo fi Tajaajila baay’atuu dha. Filannowwaan Galmaa, dandeettii Ogummaa ilma namaa, beekumsa, Qabeenya Umamaa fi baay’ummaa Qileensaa.
Bilisummaa jijjirraa iddoo hin jirreettii baay’ummaan Hiyyummaa mul’isaa. namnii tokkoo ogummaa tokkoon beekumsa olaanaa keennamuufillee YKNqabeenyaa bifa tokkoo haaramee hin dhumnee qabaatuus daldala malee gonkuma badhaadhuu hin danda’uu. hundi keenyaa karaa gabaa blisaatiin wantoota hin beekneen, xiyeeffannaa hin keennineen Ykn namoota walhinbeeknee irrattii kan hunddoofnee dha. kun beekumsa dha. gabaan yoo jiraachuu baatee Hiyeessaa meeshaalee fi beekumsa ni taanaa. Jiruun keenyaas kan gadadoo ni ta’aa. nitiis garaa Jabaattoota ni taanaa.
Gabaawwan waligaltee seeraa jijjirraa Dinagdee fi walittii dhufeenya haawasaummaa ni barbaaduu, kana waggaa 250 dura Deevid Hiyuum kan ibsee caalaa gaarii godhee kan ibsee hin jiruu, akka ibsa deevid Hiyumiittii seeroota umama sadii ni jiruu, isaaniis Mirga Abbaa qabeenyummaa, waligalteen dabarsuu fi waligalteewwan (seeroota) raawatamaa gochuu dha. kanneen kuni gaboota YKN Badhaadhina umuu kan danda’aan bu’ura sirna mummee dhaa.
Seeroota Umamaa Hiyyuum Ajaja Oritii Duraan irraa ni madduu, hin haatiin, qabeenya olaa kee hin haawwiin, dharaan hin ragiin kan jadhan irraa kan maddee dha. Taphnii”haanna” Qabeenya nama biraa saamuu hordofsisaa, Abdii badhaadhina guddisuu ni dukkaneessaa, qabeenya ambaa haawwuun Goocha Qabeenya nama biro dirqisisuun qoddachuuf nama afeeraa. kun immoo Omisha Omishuuf feedhii qabnuu balaa keessattii galchaa. Dharaan raguun kabaja haawaasaa ni busaa. Amanamummaa bulchinsaa, Amanamummaa Invastaroota, karoora yaroo dheeraa fi jijjirraa dhunfaa yaroo dheeraa gadii ni busaa. kun immoo ibsoota namooma irra caalaa ni xureessaa.
Guddinnii Dinagdeen Olaantummaa seeraatiin fi Mirgoota Abbaa qabeenyummaa dhunfaatiin Sirna siyaasaa gabaa Blisaa waliin kan walittii hidhamee dha. biyyoota Dinagdeen isaanii Ajaja jidduu galeessaa Cimaa ta’ee jalattii turan yaroo ilaalluu iddowwaan kanneenii keessattii hunda Qinxaabuu haala barbaadamuun dhiheessuu akka hin dandeenyee fi akkasumas hir’ina Nyaataa bu’ura olaanaa qabaachuu isaanii dhugaa adunyaan galmeessee qabatee dha. ta’uus Chaayinaa irraa haanga niiwzlaandi fi Ayarlaand gahuuttii Tarkaanfii Motummoonnii Dinagdee Blisa umuuf fudhatan Namoota baay’eef Fakeenya ni ta’aa. Biyyoonnii kun namoonnii Dinagdeeofii isaanii foyeessuuf akka ciman haayamuun qofa Guddina dinagdee mul’atuu fiduu danda’uu isaanii qabatamaan Aragrsisanii jruofii isaanii foyeessuuf akka ciman haayamuun qofa Guddina dinagdee mul’atuu fiduu danda’uu isaanii qabatamaan Aragrsisanii jiruu.